Kuporesa makristasi anoshanda chaizvo? Yakakura nyowani yekuvandudza 2021
Kana iwe uri munyika yeimwe nzira yekurapa, iwe ungangodaro wakanzwa nezve makristasi. Iro zita rinopihwa kumamwe zvicherwa, se quartz, kana amber. Vanhu vanotenda mune zvinobatsira zvehutano zvivakwa.
Kubata makristasi kana kuiisa pamuviri wako kunofungidzirwa kukurudzira kupora, kwemweya uye kwemweya kupora. Mvere dzinofungidzirwa kuti dzinoita izvi nekubatana zvine mutsindo nesimba remuviri wako, kana chakra. Nepo mamwe makristasi ekuporesa achifanira kudzikisira kushushikana, mamwe achifungidzirwa kuti anovandudza kutarisisa kana kugona.
Mune ziso reonei
Chakavanzika hutano hutano hwekuporesa makristasi
Zvisingashamisi, vaongorori vakaita mashoma akajairwa zvidzidzo pamakristasi. Asi imwe, yakaitwa kumashure muna 2001, yakagumisa kuti simba remaminerari aya riri "muziso reanoona."
PaEuropean Congress of Psychology muRome, vanhu ve80 vakazadza bvunzo rakagadzirirwa kuenzana nekutenda kwavo muzviitiko zvepanormal. Gare gare, boka rekudzidza rakakumbira munhu wose kufungisisa kwemaminitsi mashanu. Pachiri kubata kana chaiyo yekristz crystal kana yekristani yakakonzerwa yegirazi.
Mushure meizvozvo, vatori vechikamu vakapindura mibvunzo nezvekunzwa kwavanga vanzwa vachifungisisa nemakristasi ekuporesa. Ose chaiwo uye emanyepo makristasi akagadzira zvakafanana manzwiro. Uye vanhu vakaedza kumusoro mubvunzo-yemubvunzo-yekutenda mibvunzo vakabvunza manzwiro akakura pane avo vakaseka izvo zvakajairika.
"Takaona kuti vanhu vazhinji vaiti vanogona kunzwa kusanzwisisika. Paunenge wakabata makristasi, senge kurira, kupisa uye kudedera. Dai takavafanozivisa kuti izvi ndizvo zvinogona kuitika, ”anodaro Christopher French, purofesa wezvepfungwa paGoldsmiths, University yeLondon. "Mune mamwe mazwi, mhedzisiro yakataurwa yaive mhedzisiro yesimba rerudziro, kwete simba rekristaro."
Yakawanda yekutsvagisa inoratidza kuti simba re placebo rinogona kusimba zvakadii. Kana vanhu vakatenda kuti kurapwa kuchaita kuti vanzwe zvirinani. Vazhinji vavo vanonzwa zvirinani mushure mekurapwa. Kunyangwe kana vesaenzi vakaratidza kuti kurapwa kwakakosha.
Kutora kwake ndiko kwaungatarisira kubva kuna musayendisiti. Uye hongu, zvinenge zvakanyatsojeka kutaura kuti makristasi haana ivo pachavo vane chero eanoshamisa ehutano hunhu hwakakonzerwa kwavari nevashandisi.
Asi pfungwa dzemunhu chinhu chine simba, uye zvinonzwisisika kutaura pachena kuti makristasi haashande, kana iwe ukatsanangura "basa" sekupa rubatsiro.
"Ndinofunga kuti maonero eruzhinji nevezvokurapa nezve placebo chimwe chinhu chiri kunyepedzera kana hunyengeri," anodaro Ted Kaptchuk, purofesa wezvekurapa paHarvard Medical School. Asi ongororo yaKaptchuk pane placebo inoratidza kuti maitiro ayo ekurapa anogona kunge ari "echokwadi" uye "akasimba". Kunyangwe iye asina kudzidza makristasi, uye asingazotaure nezvehunhu hwavo kana chero chinhu chine chekuita neimwe nzira yekurapa. Kaptchuk akanyora kuti mushonga wakavakirwa-mu placebo mhedzisiro inogona kutariswa sechinhu chakasarudzika chekushanda kwayo, uye kuti mabhenefiti-anounzwa mabhenefiti anofanirwa kusimudzirwa, kwete kudzingwa.
Vanachiremba vazhinji vanotenda musimba re placebo. Chidzidzo cheBMJ cha2008 chakawana kuti ingangoita hafu yevarapi vakaongororwa vakataura vachishandisa kurapa kwepa placebo kubatsira varwere vavo. Kazhinji, chiremba anokurudzira wepamusoro-the-counter marwadzo ekudzora kana vhitamini yekuwedzera. Kunyangwe hazvo isina kuratidzwa kune zviratidzo zvemurwere. Vazhinji vaiona tsika yekumisikidza kurapa kwenzvimbo dzinotenderwa, vanyori vakapedzisa.
Kubata makristasi ekuporesa, hongu, hazvina kufanana nekumedza Advil. Usatarisira kuti chiremba wako ataure makristasi pakushanya kwako kunotevera. Kubva pamaonero emushonga wakajairika uye nesainzi-yakavakirwa sainzi, iko kutsvagurudza kuripo kunoratidza kuti vakafanana nemafuta enyoka. Asi kutsvagurudzwa pamusoro penzvimbo ye placebo kunoratidza kuti kunyangwe oiri yenyoka inogona kubatsira kune avo vanotenda… verenga zvimwe >>
mazita edu ematombo ekuunganidzamazita edu ematombo ezvisikwa shop